Xisbiga Moderaterna oo miisaaniyadiisa shaaciyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anna Kinberg Batra, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Moderaterna. Sawirqaade: Foto: Josef el Mahdi/Sveriges Radio
Xisbiga Moderaterna oo miisaaniyadiisa shaaciyey
Xisbiga Moderaterna oo soo sheegay in ay dhimayaan cashuurta.
La daabacay onsdag 3 maj 2017 kl 13.16
Xisbigga ugu weeyn mucaaridka ee Moderaterna ayaa maanta soo bandhigay miisaaniyadooda.
Moderaterna waxay sheegeeyn in ay cashuurta ka dhimayaan 22 bilyan oo karoon sanadka soo socda. Ulf Kristersson oo ah afayeenka dhaqaalaha ee Moderaterna ayaa u sheegay laanta wararka ee idaacada Sweden in ay hada sameeynayaan cashuur dhimistii ugu weeyneeyd ee ay sameeyaan ilaa iyo 2006-dii.
Dhinaca kale wuxu xisbiga Moderat-ku soo bandhigay wax kabedel ay ku sameeyeen taageerada dhaqaale ee lasiiyo dadka bilaa shaqada ah. Xisbigu wuxuu rabaa in uu xadido xadiga lacagta caaydha iyo lacagta sidoo kale la siiyo dadka dhawaantaan wadanka yimdi. Sidoo kale waxay dhimayaan muddada la qaadan karo lacagta qofka shaqo beelaa qaato taas oo la yidhaahdo A-kassa oo ay hadda ka dhigayaan 12 bilood halkii markii hore ay ka ahaan jirtey 13,5 bilood.
-Waa in ay u qalanto in la shaqeeyso, marka la barbardhigo in aan la shaqeysan, markaas waa in la adkeeyo shuuruudaha oo dadka ay ka tagaan caadh oo ay shaqeeystaan. Waan in shaqooyinka la kordhiyo oo suuqa shaqada la casriyeeyo. Taas waa la fahmi karaa in ay keenayso shaqooyin cusub.
Moderaterna waxay aaminsan yihiin in ay abuuri karaan 43 000 oo shaqo oo cusub labo sano gudahood. Xisbigu wuxuu sheegay in ay hirgelin doonaan shaqooyin 18 bilood ah oo la siiyo dadka aan hore suuqa shaqada ugu jirin, si ay ugu tababartaan meelaha ay ka shaqeeynayaan. Sidoo kale waxay sheegeen in ay ka dhimayaan dadka shaqo bixiyaha ah qiimaha ay ku ugu kacdo in qof la shaqaaleysiiyo.
Moderaterna waxa kale oo ay doonayaan in ciidamada booliska ay ku kordhiyaan 25 000 oo boolis ah iyo in ay kordhiyaan mushahaarka booliska.